RASMI: Xiriirka Kubada Cagta Yurub Oo Ganaax Culus Garka U Geliyay PSG & Marsille + Sababta %
Xiriirka kubada cagta Yurub ee loosoo gaabiyo UEFA ayaa waxay ka mamnuuceen kooxaha reer France ee Paris Saint-Germain iyo Marseille inay wax taageerayaal garoonka lasoo geli karaan illaa iyo horaanka bishaan dhamaan kulamada tartamada Yurub.
PSG ayaa waxay ku sababsatay arrintaan kadib markii taageerayaasha ay carqad ay sameeyeen lugtii labaad kulankii ay Real Madrid ku wajahaan wareega 16-ka, markaasoo ay adeegsadeen Bululeer iyo waliba Laysaro, sida warbixinta lagu yiri.
Guddiga anshaxa iyo edbinta ee xiriirka kubada cagta Yurub ee UEFA ayaa waxay amray in la xiro North Stand inta lagu jiro cayaaraha Yurub ee ka dhacay garoonka Parc des Princes, oo ay ku dheesho PSG, iyagoona ku ganaacay €43,000 oo Yuuroo oo udhiganta £37,542 Bown.
Dhanka kale, kooxda Marseille ayaa waxaa iyada looga mamnuucay taageerayaasheeda kadib markii ay soo qaateen kulankii ay ku wajahaan Athletic Bilbao, tartanka Europa League, rabasho badan, kuwaasoo sababay in la xiro tagaeerayaal.
Saddex taageerayaal Marseille ah ayaa xiray booliis iyo laba ilaaliye ammaan ayaa loo qaaday isbitaal ka dib markii taageerayaashu ay isku dhaceen ka hor ciyaarta, halka taageerayaasha kooxda Faransiiska ay sidoo kale ku qarxiyeen fuusto gudaha garoonka San Mames.
Marseille ayaa lagu ganaaxay € 30,000 oo udhiganta £ 26,197 oo Bown, waxaana laga mamnuucay taageerayaasha inay soo raacaan kooxdooda wareega 8da Europa League ee ay la ciyaarayaan RB Leipzig 5-ta bisha April ee sanadkaan 2018.
Macalinka Xulka Argentina Oo Qiray In Koobka Aduunka Ay Tashanayaan Messi – Muxuu Ka Yiri Rajadooda